२ थोपा कानमा राख्नुस् ! वृद्धको समेत सुन्ने शक्ति बृद्धि हुन्छ « Sajha Page
२ थोपा कानमा राख्नुस् ! वृद्धको समेत सुन्ने शक्ति बृद्धि हुन्छ
प्रकाशित मिति: September 11, 2018
एजेन्सी । उमेर बढ्दै गएपछि कान नसुुन्ने समस्याबाट धेरै मानिस पिडित हुने गर्दछन् । तर अहिले यो समस्या बृद्ध अवस्थामा मात्र नभई प्राय सबैमा देख्न थालिएको छ । यसले मानिसको जीवनमा निकै गम्भिर समस्याको रुप लिन सक्छ ।
उदाहरणको लागि यदि तपाइँ बाटोमा हिड्दैं हुनुहुन्छ र पछाडि बजेको हर्नलाई सुन्न सक्नुभएन भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्दछ । त्यसैगरी काम गर्ने ठाउँमा पनि एउटै कुरालाई धेरैचोटि दोहोर्याई भन्नुपर्ने कारणले गर्दा समस्या आउन सक्छ । तपाइँले यस समस्याको उपचारको लागि बजारमा धेरै किसीमका औषधिहरु पाउन सक्नुहुन्छ । तर यस समस्याको समाधान प्राकृतिक औषधिको प्रयोगबाट पनि गर्न सकिन्छ । आज हामी तपाइँलाई कान नसुन्ने समस्याबाट मुक्ति पाउने सरल प्राकृतिक उपचारबारे जानकारी दिन्छौं ।
जस्मा हामीले सधैं भान्छामा प्रयोग गर्ने साधारण सामाग्री लसुनको प्रयोग गर्न सक्छौं । लसुनमा रोगलाई निको पार्ने गुण हुन्छ । त्यसैले यसको प्रयोग विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धि समस्याहरुलाई हटाउनको लागि गरिन्छ । कानको समस्यालाई हटाउनको लागि लसुनको प्रयोग निम्नानुसार गर्न सकिन्छ ।
१) ३ वटा लसुन
२) जैतुनको तेल
३) थोपा झार्ने भाँडो ( ड्रपर )
सबैभन्दा पहिला लसुनको बोक्रालाई र्खुकाउनुहोस् । त्यसपछि यसलाई पखालेर पिसेर जुस निकाल्नुहोस् । र यस जुसलाई जैतुनको तेलसँग मिसाएर थोपा झार्ने भाँडोमा हाल्नुहोस् ।
त्यसपछि ३ वा ४ थोपा यस तेललाई आफ्नो कानमा हाल्नुहोस् । र कानबाट तेललाई बाहिर जान नदिनको लागि कपासले छोप्नुहोस् । त्यसपछि एकछिन सुतेर आराम गर्नुहोस् । यसबाट तपाइँको कानको भित्रसम्म तेल पुग्दछ । यसले तपाइँलाई छिटै आश्चर्यजनक परिणाम दिलाउँछ । नोट – यसको प्रयोग गर्दा भुलेर पनि पानि मिसिनु हुँदैन नत्र यसले कानमा झन ठुलो समस्या पैदा गर्न सक्छ ।
नोट: उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरु तथा अनलाइनबाट लिईएको हो । यसको सहि प्रयोगको लागि चिकित्सक वा सम्बन्धित बिषय विशेषज्ञसंग परामर्श लिन आवश्यक छ। यी बिषयवस्तुहरु जानकारीको लागी प्रस्तुत गरिएको हुँदा कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि टिप्सहरु प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा चिकित्सक वा विशेषज्ञको सल्लाह लिनुहोला । स्मरण रहोस् यी सम्पूर्ण टिप्सहरु प्राचिन र आयोर्वेदिक प्रणालीमा पूर्ण रुपले आधारित हुन् तर, यसको उचित र सहि प्रयोगको लागि सम्बन्धित चिकित्सक वा सम्बन्धित बिषय विशेषज्ञसंग परामर्श लिनु नै राम्रो हुन्छ ।